Amasu alindelekile okubhala okungcono... | Oxford isiZulu Living Dictionaries
Home Explore Amasu alindelekile okubhala okungcono ngesiZulu
Amasu alindelekile okubhala okungcono ngesiZulu
Ukubhala nganoma ngabe yiluphi ulimi kuncike kakhulu ekuthini ubhala mayelana nani, ubhalela bani, noma ubhala ngasiphi isihloko. Okubalulekile kodwa kakhulu ukuthi ubhalela bani; ubani ozofunda okubhalile. Ungabhala ngesihloko esifanayo kodwa izindlela zokubhala zingefani ngenxa yokuthi abazofunda lokho okubhaliwe bawuhlobo olungefani. Izinhlobo zemibhalo kungaba ukuxoxa indaba nje, ukubhalela izikhungo ezahlukene abantu abaphila kuzona, ukubhala izikhangiso, ukubhalela izikhungo zikahulumeni nazo futhi ezahlukene, njalonjalo.
Okwejwayelekile uma ubhala noma yini obhala ngayo ukuvela kwesihloko okubhalwa ngaso. Kungavela kuyisihloko nje esinamagama ambalwa kodwa ahehayo ukuthi ofundayo akulangazelele ukufunda umbhalo ngenxa yokuthi ufisa ukwazi ukuthi okubhaliwe kuquketheni. Yonke futhi imibhalo iba nohlaka olulandelwayo. Uhlaka-ke lona luba nalokhu okulandelayo; isingeniso, umzimba, kanye nesiphetho. Lokhu akubonakali kugqame kweminye imibhalo enjengezikhangiso nokunye, kodwa kuyavela ngokulandela umbhalo ukuthi kukhona futhi kuyalandelana ngendlela ejwayelekile.
Ngokwejwayelekile esingenisweni kuba khona iqoqa lendaba, noma lomsebenzi , noma umbuzo, noma inkinga yokuqukethwe. Kumele kuvele nezinhloso noma izinjongo zalokho okubhaliwe. Kuyavela futhi kafushane ukuthi lolo daba lubekwe kanjani ngaphakathi endabeni ebhalilwe. Lokhu kungavela ngezitatimende noma ngemibuzo ebuzwayo ngesikhathi kungeniswa umbhalo. Le ngxenye yesingeniso ayibi yinde kakhulu ngoba ofundayo kumele abe nokulangazelela ukwedlulela engxenyeni elandelayo engumzimba noma ingqikithi yokubhalwa ngako.
Uma sekungenwa-ke emzimbeni noma engqikithi leyo okubhalwa ngayo amaphuzu abekwa ngezihlokwana ezihambisana nezindikimba noma imibono ngokuhlobana kwayo. Lezi zihlokwana noma imibuzwana kuvame ukuthi kuhambisane nesihloko esikhulu. Obhalayo-ke kumele abe namasu okuziqambela kahle lezi zihlokwana ukuze ofundayo aheheke ukufunda umbhalo aze awuqede ngoba uyalandeleka. Kubalulekile-ke, uma umbhali ebhala nganoma ngani ayaziyo ukuthi abayazi abafundi abazofunda umbhalo, ukuba akuchaze ukuze ofundayo akwazi ukuwulandela kahle umbhalo. Okubalulekile futhi okumele umbhali wanoma ngabe yiluphi uhlobo lombhalo akuqaphele, uma kwenzeka ecaphuna imibono yabanye ababhali noma izinkulumo zabanye abantu, ukuba aveze ukuthi akusho yena kodwa kungumbono noma umbuzo womunye umuntu. Kwejwayelekile ukuba eminye imibhalo igcine seyidale izinxushunxushu emiphakathini eminingi ngenxa yokuthi umbhali usebenzise imibono, amagama, noma imibuzo yabanye abantu ngaphandle kokusho ukuthi akuveli kuyena lokho kodwa kunokufana kwesimo abhale ngaso noma ukucaphune ngenxa yokuhlobana kwakho nalokho abhala ngako.
Ekugcineni kombhalo kumele kuvele ukuthi umbhalo usuyaphela ngokuvela kweqoqa nalo elifushane eligcizelela amaphuzu okubhalwa ngawo. Lokhu kusiza kakhulu futhi uma umbhalo umude, okwenza umfundi angakwazi ukukhumbula ukuthi konje umbhalo bewukhuluma ngani ekuqaleni, nokuthi kungani ugcine ngokugcinwe ngako. Lapha kule ngxenye akuvamile ukuba kuvele amaphuzu angekho embhalweni noma imibuzo emisha; kodwa kuba amanqampunqampu nje alokho okuvezwe phakathi embhalweni. Lokhu kungenziwa ngezindlela ezahlukene, okungaba izitatimende, izibabazo, noma imibuzo.
Okunye okubalulekile uma kubhekwa, kakhulukazi uhlaka lombhalo, ukuqondaniswa kwezihlokwana nezindikimba okubhalwa ngazo nesihloko esikhulu. Kumele kube namaphuzu akhombisa ukujula kwengxoxo mayelana nesihloko okubhalwa ngaso. Isiphetho naso kumele sikwazi ukucacisa kahle kofundayo ukuze nemicabango okungenzeka abe nayo ngesikhathi efunda umbhalo iphenduleke ngokweneliseka. Phakathi futhi endabeni kubalulekile ukuthi ibonakale icace kahle insika yokuxoxwa ngakho ngokuba amaphuzu abekiwe ahambisane nokubhalwe ngakho, abambelele ngqo kukho. Uma kubekwa amaphuzu kumele angevele ajikijelwe nje bunganikezwa ubufakazi obuwasekelayo. Noma yimuphi umbhalo obhalelwe abantu kuyacopheleleka ukuthi unobuqiniso.
Ulimi lwesiZulu luyakuqaphela kakhulu futhi ukuthi iyalandelwa imigomo yokusebenzisa ulimi ukuze lugcineke lusezingeni lokubhala olwamukelekile nolulingana nezinye izilimi zomhlaba. Kunemithetho yokubhala ebekelwe abasebenzisi bolimi ukuze okubhalwe ngolimi lwesiZulu kuqondwe yiwo wonke umuntu okwazi ukufunda ulimi lwesiZulu. Noma umbhalo ungaba nohlonze olungakanani, kuyamkhinyabeza ofundayo nowazi ulimi uma njalo embhalweni ezohlangana namaphutha okubhala abengalungiseka. Okokugcina kokuningana, abafundi bolimi lwesiZulu bayakuqaphela futhi ukuthi imibhalo ebhalwe ngolimi ikhombisa ukujula kolwazi ngokubhalwe ngakho. Noma yimuphi nje umbhalo uyaqapheleka futhi uyenqeneka ukuwufunda uma umbhali enkantuza ngamaphuzu ahlose ukubhala ngawo, kanti umbhalo onamaphutha awuhehi kubafundi.